Sidee noqon doonaa xilli-duufaantii 2017? | Saadaasha Shabakadda
Sidee noqon doonaa xilli-duufaantii 2017?
Duufaannada Ka hadalka iyaga badiyaa sabab uma ahan farxad, gaar ahaan markaan xusuusanno magacyo sida Katrina ama Matthew. Labaduba waxay gaareen Qeybta 5 ee miisaanka 'Saffir-Simpson', labaduba waxay geysteen khasaaro iyo khasaaro weyn. Haddana sanad walba waa inaan.
Si tartiib tartiib ah khubarada ayaa loogu dhiirigelinayaa inay sameeyaan saadaashooda, in kasta oo xilligu aanu bilaaban doonin illaa iyo 1-da Juun. Quburada Saadaasha Hawada Caalamiga ah ee Cimilada ayaa rajeynaya Ilaa Lix Duufaan. Laakiin intaas kaliya maahan, waxay noqon kartaa xilligii ugu darnaa tan iyo 2005.
Global Weather Oscillations waxay isticmaaleen xogta xilliyadii 8-dii sano ee la soo dhaafay, oo ay ku jiraan saadaasha duufaannada ka dhaca Badweynta Atlantik oo ay ku jiraan Badda Caribbean-ka iyo Gacanka Mexico. Marka, waxay saadaaliyeen in sanadkan 12 duufaano iyo 6 duufaano ay soo bixi doonaan, kuwaas oo 2 ama 3 muhiim noqon karaan. Marka, waxay noqon doontaa sanad kaas oo, markale, qaababkan ay mar kale warka ka dhigi doonaan.
Oo taasi waa, heerkulka biyaha baddu wuu ka sarreeyaa sida caadiga ah, gaar ahaan gobolka Karibiyaanka iyo Maraykanka u dhow. Haddii aan tixgelinno in duufaannadu u baahan yihiin inay ku quudiyaan biyo diiran, qiyaastii 22ºC, waxaan ka hadli karnaa xilliga sababi doona dhaawaca ugu badan ee gobolladaas 12kii sano ee la soo dhaafay, in kasta oo ay jirto in El Niño uu sii jiro hurdo.
Magacyada xilli ciyaareedka 2017 waxay noqon doonaan sidan soo socota: Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harvey, Irma, Jose, Katia, Lee, Maria, Nate, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince, Withney.
Sidaad u aragto, ma jiro Matthew mana jiro Katrina. Tan waxaa u sabab ah magacyada laxiriira duufaannada waxyeelada badan geysta dib looma isticmaalo.
Sannadkii hore wuxuu ahaa sanad la xusuusto, oo leh 14 duufaano iyo 6 duufaanno, oo saddex ka mid ahi aad u burbureen. Laakiin waa inaan ka digtoonaano waxa dhici kara 2017.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Saadaalin » Sidee noqon doonaa xilli-duufaantii 2017?
Fiidiyowga dhibta badan ayaa muujinaya dhalaalida barafka ku yaal Alaska sannadihii 2007 ilaa 2015
California Redwoods waxaa bacrimiya siigada ka timaada lamadegaanka Gobi